21 Waxyaabood oo Xiiso leh oo Saaxiibbada lala Sameeyo Mar Walba - Goobta Hantida
Bogga ugu weyn 21 Arrimood oo Xiiso leh oo Saaxiibbada lala Sameeyo Mar Walba
Waqti la qaadashada saaxiibbada waa wax sharaf leh in la sameeyo; waxay xoojisaa isku xidhnaanta waxayna soo noolaysaa xidhiidhka. Meel kasta oo aad ku nooshahay, waxaa jira waxyaabo badan oo xiiso leh oo lala sameeyo saaxiibbadaada mar kasta oo ay soo baxaan.
Shaki kuma jiro: qof walba wuxuu u baahan yahay saaxiibo. Laakiin markii in badan oo naga mid ahi ay hadda u jiraan masaafo ka fog saaxiibbadeen, xiriirku wuxuu lumiyaa qabashadiisa maadaama faa'iidooyinka wehelnimada, taageerada shucuureed, iyo caawimaadda wax ku oolka ah laga daayo ciyaarta. Sidaa darteed, quruxda saaxiibtinimadu waa mid lagu madadaasho madadaalo.
Haddii ay kugu adag tahay inaad ogaato waxa aad saaxiibbada ku samaynayso mar walba, maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa xulashooyin fara badan oo aad kala dooran karto.
Saaxiibtinimadu waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa caafimaadkaaga iyo fayo-qabkaaga, laakiin mar walba ma fududa in la dhiso ama la ilaaliyo saaxiibtinimada. Sidan oo kale, waxa muhiim ah in aad fahanto faa’iidada saaxiibtinimadu u leedahay noloshaada iyo waxa aad samayn karto si aad u horumariso una kobciso saaxiibtinimada.
Falanqayntii 2010 ee 148 daraasadood oo ka koobnaa in ka badan 308,000 oo qof, dhakhaatiirta cilminafsiga ee Jaamacadda Brigham Young University, USA, waxay ogaadeen in dadka leh xiriir bulsheed oo wanaagsan ay muddo dheer noolaadaan, waxayna ku soo gabagabeeyeen in xiriirrada bulsheed ee daciifka ahi ay halis u tahay caafimaadka sida sigaar cabista 15 sigaar maalintii.
Professor Suzanne Degges-White, guddoomiyaha Waaxda La -talinta, Dadka Waaweyn iyo Tacliinta Sare ee Jaamacadda Waqooyiga Illinois, USA, oo dhowr buug ka qortay mawduucaas, ayaa ammaanay faa'iidooyinka badan ee saaxiibbada. “Saaxiibbadu waxay sare u qaadaan isku-kalsoonideena waxayna nolosheenna siiyaan macno. Waxay na dareensiiyaan inaan muhiim nahay. Ogaanshaha inaan leenahay saaxiibo wanaagsan, dadka na fahmaya ayaa nolosha kor u qaada, ”ayay tiri.
Waa kuwan liiska faa'iidooyinka saaxiibtinimada:
Kalinnimada oo yaraata iyo go'doominta bulshada
Saaxiibadu waxay kaa caawiyaan dhisitaanka kalsoonidaada
Asxaabta ayaa ku dhiiri gelisa
#1 Kalinnimada oo yaraata iyo go'doominta bulshada
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay isku xirnaan bulsheed si uu u noolaado oo u barwaaqoobo. Laakiin markay dadku da 'yihiin, waxay inta badan kaligood waqti badan qaataan. Kalinimada iyo go'doominta bulshadu waxay saamayn kartaa fayoobaanta maskaxeed iyo jidheed, waxaana soo badanaya dadka maalmahan dareema cidlo.
Si aad u fahanto farqiga u dhexeeya walaacyadan, ka fikir sidan: Saaxiibbadu waxay kaa caawiyaan inaad ka fogaato go'doominta, laakiin wanaagsan saaxiibadu waxay kaa caawiyaan ka hortagga kelinimada.
#2 Walaaca oo yaraaday
Qof walba wuxuu la kulmaa xoogaa walwal ah. Waxay ku imaan kartaa qiyaaso waaweyn ama aan microscopic ahayn, laakiin si kasta oo ay u yar tahay marka hore, si dhakhso ah ayay kuu urursan kartaa oo ku buuxin kartaa.
Wakhti la qaadashada asxaabta waxay kaloo kaa caawin kartaa yareynta walaaca. Sida laga soo xigtay Harvard Medical School, isku xirnaanta bulshada ayaa kaa caawineysa yareynta heerarka walaaca, taas oo dhaawici karta halbowlayaasha wadnaha, shaqada mindhicirka, nidaaminta insulinta, iyo habka difaaca jirka.
#3 Taageero niyadeed
Taageerada niyadu waa faa'ido muhiim u ah cilaaqaadka.
Saaxiibbadaadu waxay ku taageeri karaan:
dhagaysi - run ahaantii dhegeysiga - dhibaatooyinkaaga
adiga oo waxyaalo fiican kuu samaynaya sababtoo ah
kaa caawinaya in uu ku mashquulo marka aad murugooto ama murugooto
Haddii aad leedahay xiriir jaceyl, waxaa laga yaabaa inaad marka hore u tagto lamaanahaaga. Tani waa wax iska caadi ah, lammaanayaasha jaceylka gabi ahaanba waxay bixin karaan raaxo iyo dammaanad. Si kastaba ha ahaatee, ma aha inay adiga kuu ahaadaan oo keliya isha taageerada niyadeed.
Khubarada xiriirka waxay ku talinayaan in la sii wado saaxiibtinimada dadka marka laga reebo lamaanahaaga, maxaa yeelay tani waxay ka faa'iideysan kartaa caafimaadka shucuureed oo ay weheliso caafimaadka xiriirka.
#4 Saaxiibadu waxay kaa caawiyaan dhisitaanka kalsoonidaada
Qof kastaa wuxuu qabaa shaki nafsiyeed iyo kalsooni darro had iyo jeer. Laakiin haysashada saaxiibo taageersan ayaa kaalin weyn ka qaadata dhisidda isku-kalsoonaantaada, ama inta aad naftaada u qaddariso oo aad jeceshahay.
Saaxiibbada ku kaalmeeya ayaa kaa caawin kara inaad dareento kalsooni dheeraad ah iyagoo ku siinaya ammaan iyo dib -u -hubin marka aad dareento hubin la'aan. Waxay iftiimin doonaan sida aad u yaab badan tahay iyo inta aad dadka kale u fidiso.
#5 Saaxiibbada ayaa ku dhiirrigeliya
Asxaabtu waa isha wax ku oolka ah ee saamaynta togan leh. Haddii aad saaxiibo la samaysato dad deeqsi ah waqtigooda, caawiya dadka kale, hami leh ama ku wajahan qoyska, waxaad u badan tahay inaad adigu samaysato qiyamkaas.
Saaxiibo sharaf leh ayaa awood u leh inay kugu qaabeeyaan nooca ugu wanaagsan ee naftaada. Way ku arkaan oo way ku jecel yihiin qofka dhabta ah ee aad tahay. Waxay kugu dhiirigelinayaan oo kugu riixayaan inaad noqoto nooca ugu fiican ee aad noqon karto.
21 Waxyaabood oo Xiiso Leh oo Saaxiibbada lala Sameeyo Mar Walba
Halkan waxaa ah 21 waxyaalood oo xiiso leh oo aad la samayn karto saaxiibbadaada mar walba.
#1 Xaflad casho dheri ah
Marti xaflad casho ah oo weydii qof walba inuu keeno saxan si uu u wadaago. Haddii aadan ku raaxaysan karin karinta, waxaa laga yaabaa inaad isku daydo inaad barato sida loo kariyo saxan cusub adiga iyo saaxiibbadaa.
#2 Marti maalin isboorti
Midba midka kale siiya manicures. Tijaabi timaha cusub. Samee qaar ka mid ah waji-xidhka wejiga ama bakhtiinta adoo isticmaalaya waxyaabaha dabiiciga ah, ee guriga. Markaas cab mimosas.
#3 Marathon filimada
Gal Netflix oo fiirso dhacdo kasta oo ah “Waxyaabaha Qariibka ah” Ama samee marathon '80 -maadkii, daawashada' Pretty in Pink ',' 'The Breakfast Club' 'iyo dhammaan kuwii aan ugu jeclayn. Ma lihid xubinnimada Netflix? Hel tijaabada bilaashka ah oo kaliya marathon -ka!
#4 Xisbiga Pinterest
Ma taqaan dhammaan farsamooyinkaas Pinterest ee qabow ee aad tiraahdo waad samayn doontaa? Samee. Guriga hal habeen saaxiibada. Ka dibna samee qaar ka mid ah kuwa hilibka doofaarka ku duuban wax kasta oo aad dhimatay si aad isugu daydo!
#5 Tag baarkinka
Xirxir duugasho. Joogso Daawo dadka. Ku ciyaar is -badallada.
#6 Samee xaflad urur
Samee maalin maalmaha fasaxa ah oo kasta oo aad tagto mid kasta oo ka mid ah guryaha saaxiibbada oo ka caawi inay nadiifiyaan armaajo, qol, garaash, wax kasta. U adeegso cabbitaan iyo cunto iyo dhexdooda alaab ganacsi.
#7 Isxilqaan si wada jir ah
Si kasta ha ahaato nooca urur ee aad doorato inaad waqtigaaga u hurato, had iyo jeer way ka xiiso badan tahay marka aad saaxiib leedahay. Waxaad ku xirnaan doontaa heer ka duwan markaad dib u soo celiso - qaado shaah ama wada cashee kadib, oo ka hadal khibradahaaga.
#8 Riwaayadaha beerta dhexdeeda
Xagaaga oo dhan, jardiinooyin badan ayaa martigeliya riwaayado lacag la'aan ah. La soco asxaabtaada. Joogso, soo qaado casho madadaalo. Kani waa hab aad u nasasho badan si aad ugu nasato habeen xagaaga kulul shaqada ka dib.
#9 Isxilqaan si wada jir ah
U soo bandhig inaad u qabato shaqada deyrka xarunta waayeelka maxalliga ah ama aad la joogtid carruurta YMCA. Dhowr saacadood oo iskaa -wax -u -qabso ah ka dib, waxaad yeelan doontaan ixtiraam cusub oo midba midka kale iyo wax cusub oo laga sheekaysto.
#10 Ciyaar looxyo
Jiid Scrabble ama Yahtzee. Waxaad la ciyaari kartaa oo la ciyaari kartaa ciyaaro badan kooxo waaweyn ama kuwa yaryar. Qabso tartan oo midba midka kale ku tartamo. Waa kuwan qaar ka mid ah fikradaha ciyaarta guddiga.
#11 Tartanka ciyaarta fiidiyaha
Aan ku jirin ciyaaraha guddiga? OK Hagaag, ka waran tartanka ciyaarta fiidiyaha? Haddii ay tahay ciyaartii ugu dambaysay ee qoob -ka -ciyaarka ama “Wacitaanka Waajibaadka,” iska hor imaad oo abaalmarino (ama cunto) sii kuwa guulaysta.
#12 Qabso kubad iyo fiidmeerta oo aad kubbadda koleyga ku cayaarto beerta nasashada
Qabso kubbadda koleyga ama teebka teniska. Jardiinooyinka badankood waxay leeyihiin maxkamado iyo beero aad si bilaash ah ugu isticmaali karto marba haddii aysan jirin dhacdo abaabulan oo socota.
Ma heshay saaxiib muusig? Ku martiqaad iyaga oo wata qalabkooda oo jiidaya. Cabitaanno dhowr ah ayaa ku hilmaami doona in codkaagu ka badan yahay Rebecca Black marka loo eego Rihanna, waxaadna ku qaylin doontaa qalbigaaga oo aad la qaylin doontaa jadwalkaagii ugu dambeeyay oo aan waqti lahayn.
#14 Xallinta xujooyinka
Haddii ay yihiin nooca jigsaw -ga ama kuwa teaser -maskaxeed, waxaad ku dhaqmaysaa xooggaaga gudaha waxaadna ku dhaqmaysaa samir iyo go'aan.
#15 Tag quusidda qashinka
Haa Waxaan idhi. Quusitaanka qashin -qubka wuxuu noqon karaa mid aad u xiiso badan. Waxaad wasakhayn doontaa oo aad nadiifin doontaa hadhow. Fiiri qashin -qubka aaggaaga oo arag waxaad ka heli karto. Xitaa waxaad heli kartaa casho! Waa mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee lala yeesho saaxiibbada marka aad caajiso.
#16 Tag iibka dayrka
Qaado lacagtaas oo dhan ee aad ka samaysay iibinta dayrkaaga oo ku soo wareeji hareeraha magaaladaada adiga oo raadinaya waxyaabo qabow. Waxaa laga yaabaa inaad xitaa wax hagaajiso oo aad dib u iibiso.
#17 Habeenka Turubka
Haddii aad u abaabusho madadaalo ama lacag, habeenka turubku waa waqti madadaalo leh oo aan badbaado lahayn-gaar ahaan haddii aad tahay dhammaan hiwaayadda. Ku dar cayaaraha cabbitaanka oo xidho muraayadaha indhaha - qaabka turubka - si aad u sii qosol badan.
#18 Ugaarsiga Qasnadda
Diyaari tilmaamahaaga oo ku qari hareeraha guriga. Mid kastaa waa inuu u horseedaa kan xigta, finalkana waa inuu u keenaa kan ku guuleysta abaalmarin gaar ah. Looma baahna in wax la adkeeyo: ka dhig dhalo khamri ah ama wax kale oo fudud.
#19 Ka Qaybgal Carwada Degmada
Carwooyinka gobolka waa ku -faanidda miyiga maxaa yeelay beeraleydu waxay isku diyaariyaan sanadka oo dhan si ay u muujiyaan xoolahooda ugu wanaagsan iyo wax -soo -saarkooda ugu wanaagsan.
#20 Hayso Habeen Dhar
Uma baahnid inaad ka tagto guriga si aad u qaddariso ku -sifaynta dabeecad ama aqoonsi aan ahayn taada.
#21 Akhri buugaag wanaagsan
Ha ku dhejin fikradaha aan khayaaliga ahayn ama fekerka xun. Sheekooyinka mala -awaalka ahi waa sarbeebaha oo waxay u baahan tahay qoto dheer iyo xikmad in la kala furfuro. Akhrinta buugaag aad u fiican ayaa weli ah mid ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee lala yeesho saaxiibbada maadaama ay kaa caawineyso inaad wax barato oo aad isku mar cayaarto.
In kasta oo dhejintan blog -ku ay sahamisay qaar ka mid ah waxyaabaha xiisaha leh ee lala yeelanayo saaxiibbada, haddana waxaa jira hawlo badan oo la baadhi karo. Halkaas u bax, ku raaxayso oo abuuro xusuus sixir!
greatgood.berkeley.edu - Sababta ay Asxaabtaadu uga Muhiimsan yihiin intaad u malaynayso
explore-life.com - Saaxiibbada Ugu Wanaagsan?
verywellmind.com - 6 Sababood oo Asxaabtu Muhiim u yihiin
Sida Loo Sameeyo Lacag Dheeraad ah Wadista Uber maalmaha fasaxa
21 waxyaabood oo madadaalo leh oo la sameeyo habeenkii | Maskaxda Afuufay!
13 Siyaabaha ugu jaban ee lagu Heli karo Tigidhada Lixda Calan ee Bishan
Sida Loogu Helo Shatiga Guurka San Diego | Hagaha Buuxa
Tignoolajiyada macluumaadka waxa ay ka kooban tahay horumarinta, dayactirka, iyo isticmaalka nidaamyada kombayutarka ee habaynta iyo faafinta xogta.…